Once the dead elephant is in the middle of the ocean only stupid crow (not peahen) DASSK will realized that she cannot fly back to the land. | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« Our parents could be proud of their children’s contribution in shaping the history of Burma or Myanmar in their own way. ငုပ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက်
မြန်မာ့ လွှတ်တော်သည် ဦးအောင်သောင်းကို အမေရိကန်၏ Black List သွင်းမှုအား ညံ့ဖျင်းစွာဖြင့် လက်မခံပဲထကန့်ကွက်လိုက်ခြင်း »
Once the dead elephant is in the middle of the ocean only stupid crow (not peahen) DASSK will realized that she cannot fly back to the land.
The problem is not that they don’t know the truth BUT Myanmar Military leaders are using the Islamophobic Hate Speeches against Rohingyas and Myanmar Muslims for their POLITICAL BENEFIT.
IF they (Myanmar generals) dare to stupidly continue this dangerous exploitation of the innocent Buddhists …there is NO OTHER WAY…after 2015…The whole world: UN, USA, Myanmar people need to punish ALL the MILITARY GENERALS SEVERELY….
Now even DASSK and NLD are stupidly believing that these CRIMINAL MILITARY GENERALS would allow them to win the GE 2015 to rule Myanmar.
အမှန်တရား-အရှိတရားကို ရိုးရိုးသားသား လက်ခံလိုက်ပါ-
နိုင်မယ်ထင်လို့ အသေအလဲ ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ အမုန်းတ ရားတွေကို လွှတ်ချလိုက်ပါ-
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးတွေ လက်တွဲပြီး လုပ်ကြပါစို့-
သာယာချမ်းမြေ့ပြီး အခွင့်အလန်းကောင်းတွေနဲ့ပြည့်နှက် နေတဲ့ ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံကြီး အမွေပေးခဲ့ရအောင်-
This entry was posted on November 15, 2014 at 4:09 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “Once the dead elephant is in the middle of the ocean only stupid crow (not peahen) DASSK will realized that she cannot fly back to the land.”
November 15, 2014 at 4:24 am | Reply
ကိုယ်တိုင်လည်း သမိုင်းကြောင်း တစ်ခါလေးမှ မကောင်းဖူးတဲ့အပြင်…
သူတပါးရဲ့ အင်မတန်ထွန်းပြောင်ခဲ့တဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဖျက်ဆီးချင်နေတဲ့လူတွေ….
သမိုင်းကို ဖျက်ရင်းနဲ့ လူကောင်းတွေရဲ့ သမိုင်းက မပျက်ဘဲ မင်းတို့လူယုတ်လူညံ့တွေပဲ ပျက်ကုန်လိမ့်မယ်။
သမိုင်းကောင်း ရာဇ၀င်ကောင်းတွေဟာ ဘာနဲ့ဖျက်ဖျက် ဘယ်တော့မှ မပျက်ဘူး….
November 15, 2014 at 4:46 am | Reply
NLD ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေက ကျနော့ပို့စ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူတို့အမြင်ကို ပြောရဲရင် ကြားချင်ပါတယ်။
ကျနော်သိဖို့ထက် အောက်ခြေပါတီဝင်တွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိသင့်ပါတယ်။ လူထုကို ကိုယ်စားအပြုဆုံး ပါတီကြီးရဲ့ အရေးအရာဖြစ်နေလို့ပါ။
နိုင်ဟံသာစတဲ့ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒေါ်စုနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာ အခုအချိုးအတိုင်းဘဲ ဒေါ်စုက သူနဲ့ သူ့အထုပ်ကိုင် နှစ်ယောက်ထဲ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်။
ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တွေကို မခေါ်ဘဲ တစ်ယောက်တည်း တစ်ကိုယ်ကောင်း တွေ့နေတာကို ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်က NLD ဗဟိုအမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေ အင်မတန်အံ့သြနေကြကြောင်း၊ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်းကို သတင်းစာဆရာ ဘာတီးလ်လင့်တနာကို ရင်ဖွင့်ခဲ့တာကို ဘာတီးလ်က ဆောင်းပါးတစ်စောင်မှာ ဖေါ်ထုတ်ရေးသားခဲ့တယ်။
ဒေါ်စုဟာ ပြည်တွင်း ပြည်ပက သူတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသမျှ အကြိမ်ပေါင်းမြောက်များစွာမှာ ပါတီရဲ့ ဒုတိယတန်းခေါင်းဆောင်တွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ဂရုမစိုက် လစ်လျှူရှုနေမှုတွေကို ဝေဖန်မှုတွေကြားထဲကဘဲ တမင်ဆက်လက် လုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်။
ပါတီရဲ့ အဆင့်ဆင့် ခေါင်းဆောင်မှုကို ဘာအတွက် သားကြောဖြတ်သလို လုပ်နေရတာလဲ။
သူတစ်ခုခုဖြစ်သွားရင် ပါတီတစ်ခုလုံးကို အထုပ်ဆွဲလက်ထဲ အပ်ခဲ့မှာလား။
အာဏာရှင် ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်သန်းရွှေတောင် သူ့လိုလုပ်ခဲ့တယ် မထင်ပါဘူး။
ဆက်ပြောရရင် အခုလက်ရှိပါတီအလုပ်အမှုဆောင်တွေဟာလည်း အောက်ခြေထုပါဝင်တဲ့ ပါတီညီလာခံက ရွေးချယ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့စိတ်ကြိုက် ရွေးခဲ့တာဖြစ်နေပြန်တယ်။ (CEC ထဲမှာ လူတော်တွေရှိတာကို အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။)
ဟိုတလောကလည်း မီဒီယာသမားတစ်ယောက်က ကြိုက်တဲ့ဝန်ကြီးကို တွေ့လို့ရတယ်။ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ဒေါ်စုကို တွေ့လို့မရဘူးလို့ ငြီးငြူပြီး ရေးခဲ့သေးတယ်။
အာဏာမဲ့ ပါတီခေါင်းဆောင်ဘဝမှာတောင် ဒီလောက် ဖြစ်နေရင် –
ဘယ်လောက်အမြင်ကျဉ်း၊ အမျှော်အမြင်နည်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်လည်းဆိုတာ ကြည့်။
ဟိုဘက်က လက်ထောက် ၁၄ယောက်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဖက်က လက်ထောက် တစ်ယောက်တည်း။
အဲဒီတစ်ယောက်တောင် ပါတီခေါင်းဆောင် မဟုတ်သေးဘူး။
အဝတ်အစားရွေး၊ ဆေးတိုက်၊ အချိန်ဇယားကိုင်ပေးတဲ့ ထီးကိုင်၊ ဘိနပ်ကိုင်။ ဘက်အိပ်လွယ်။